Ise kacha mma gam akporo Otu smartphones nke 2018 | Gam akporosis
Kacha mma gam akporo Otu smartphones nke 2018
Eder Ferreño | | Ngwa gam akporo
Gam akporo Otu abụrụla otu n'ime ndị egwu kachasị egwu nke afọ. Na 2018, ekwentị ndị ọzọ ejirila ụdị sistemụ arụmọrụ a karịa mgbe ọ bụla, ngụkọta nke iri na ise. Ihe abụrụla nnukwu nkwado maka ya, ọkachasị mgbe ọ malitere ngbanwe ya na ahịa ekwentị, dika anyi gwara gi.
Afọ abụọ nke sistemụ arụmọrụ emelitere, na agbanyeghị asịrị niile ha agaghị agbanwe, bụ otu uru dị ukwuu nke gam akporo One. Ihe meriri ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ. Dị ka anyị kwurula, ngụkọta nke smartphones iri na ise abatawo na ụdị sistemụ arụmọrụ a. N'ime ha enwere ọtụtụ ịtụle.
Ya mere, n’okpuru anyị ga-ahapụrụ gị ekwentị kacha mma na gam akporo Otu nke ebidola n’ụlọ ahịa na 2018. elsdị na-egosi na ụdị sistemụ arụmọrụ a dị ezigbo ndụ ma nwee ọtụtụ ohere na ahịa gam akporo. Njikere izute ha niile?
2 Xiaomi My A2 Lite
3 Moto Otu
Xiaomi ahapụla anyị afọ a ọgbọ nke abụọ nke ekwentị gị na gam akporo Otu. Ọgbọ ọhụrụ a bụ onye Xiaomi Mi A2 na-eduzi ya, otu n'ime ụdị ndị ama ama n'ime ọkwa dị elu. Ya mere ọ bụ ihe nlere anya iji tụlee, na mgbakwunye na ịwụ elu na ogo ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga. Pụrụ ịhụ nkọwa ya zuru ezu a njikọ.
Ebe etiti a na-ahapụ anyị imewe na-enweghị ọkwa, ụfọdụ ezi ụdịdị na-elekwasị anya na foto, na ụdị sistemụ arụmọrụ a nke enweghị oyi akwa ma ọ bụ ngwa na-enweghị isi. Ngwakọta dị mma iji tụlee, na nke ahụ dị ka ọgbọ mbụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ahịa.
Nwere mmasị na Xiaomi Mi A2? Nwere ike ịzụta ya ugbu a, maka obere oge ka a ọnụahịa nke 227 euro. Dị a njikọ.
Yana ngwaọrụ e kwuru na mbụ, akara ndị China wepụtara Xiaomi Mi A2 Lite a. Ọ bụ ekwentị anyị nwere ike ịhụ dịka ezigbo onye nọchiri Mi A1 nke afọ gara aga. Nkọwapụta enwewo ọganihu ka mma, na-elekwasị anya na batrị ahụ, na ikike dị elu ugbu a, ma na-edebe gam akporo Otu.
Ekwentị a abatala na ọkwa ya, otu n'ime ọnọdụ nke afọ, nke gbanwere ngwa ngwa. Ọ bụ ihe ọzọ dị mma nlereanya n'ime etiti, dịtụ mfe karịa nke gara aga, mana ọ na-atọkwa ụtọ nke ukwuu. Na mgbakwunye na ịbụ nwetụrụ ihe inweta na usoro nke price.
Ebe ị nwere ike ịzụta Xiaomi Mi A2 Lite a na psiri ike nke 185,70 euro. Nwere ike ịzụta ya Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Motorola abụwo otu n'ime ụdị ikpeazụ ịhapụ anyị na ekwentị gam akporo Otu n'ahịa. Dị ka ọ dị na mbụ na ụdị sistemụ arụmọrụ a, ọ bụ ụdị nke ruru etiti. Yabụ na ọ bụ sọsọ mpi na ngwaọrụ ndị gara aga nke anyị kwuru maka ya. N'etiti etiti bụ akụkụ nke Motorola nwere ihe ịga nke ọma.
Ya mere, ha choro itinye ihe ịga nke ọma a na ụdị nke jikọtara nkọwa dị mma, na ị pụrụ ịhụ ebe a, site na etiti di n'etiti, na uru nke inwe Android One dị ka sistemụ arụmọrụ. Yabụ na ọ bụ ihe atụ ga-enweta mmelite tupu ngwaọrụ ndị ọzọ na katalọgụ ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwaọrụ a dị ugbu a na a ọnụahịa nke euro 269 na Amazon, ekele maka mbelata 10%. Ị nwere ike zụta ebe a.
Dị ahụ bụ nke mbụ wepụtara ekwentị gam akporo Otu na Europe. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ihe ịga nke ọma, ha na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụdị nke sistemụ arụmọrụ na ụfọdụ ụdị ha. N'afọ a, ha hapụrụ anyị ngwaọrụ abụọ dị iche iche, n'etiti nke a bụ Aquaris X2 Pro, nke ị nwere ike ịhụ nkọwa ya a njikọ.
Ọ bụ ekwentị karịrị akarị jiri ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya site na etiti etiti taa. Ezi nkọwa, na a abụọ n'azụ igwefoto, na ihuenyo na mkpa okpokolo agba, na ngwa ngwa mmelite ekele gam akporo Otu. Na mgbakwunye na-enwe nkwa nke a ika dị ka BQ.
Enwere ike ịzụta ekwentị a ugbu a site na a ọnụahịa nke 349,33 euro na nkwalite na Amazon, dị Ebe a.
Nokia 8.1 bụ otu n’ime ụdị ikpeazụ emere ụlọ ahịa. Nke a ika ekwentị, ọkọnọ tupu ọnwa a, rute na akuku nke etiti di elu, nke bu ihe ozo nke ndi n’enye n’aja. Nokia bụ otu n'ime ụdị ndị ahọrọla iji akwa oyi akwa na ekwentị ha. Na mgbakwunye, na mmalite nke afọ ha kwuru na ekwentị ha ga-eji gam akporo Otu.
Ejiri aha dị iche iche mara ekwentị a. Ebe ọ bụ na e gosipụtara ya na China dị ka X7, na Europe A maara ya dị ka Nokia 7 Plus ma ọ bụ Nokia 8.1 N'ihi ya, ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ. Mana ọ bụ ezigbo ekwentị, nke na-apụ apụ n'etiti etiti, ekele maka iji gam akporo Otu.
Ọ dị na nkwalite na a ọnụahịa nke 253 euro na Amazon. Ị nwere ike Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kacha mma gam akporo Otu smartphones nke 2018
Site na East East ka Alchemist Code, otu n'ime RPG RPG nke 2018